Fibreglass esisiStrand Mat Emulsion Umatshini
I-FRP imbiza yeentyatyambo
Iphaneli yeSandwich ye3D
Xa ilaphu lifakwe kwi-resin ye-thermoset, intsimbi ifunxa i-resin kwaye inyukele kubude obucwangcisiweyo ngaphambili. Ngenxa yolwakhiwo oluhlanganisiweyo, ii-composites ezenziwe nge-3D sandwich ephothiweyo yelaphu ziyaziqhayisa ngokuchasene ne-delamination kwi-honeycomb yesiko kunye nezinto ezenziwe nge-foam. Yenza ...
Ukwakhiwa kwengubo ye-3-D yento entsha esandula ukwenziwa. Umphezulu welaphu unxibelelene ngokuqinileyo omnye komnye yimicu yemfumba ethe nkqo edityaniswe nezikhumba. Ke ngoko, i-3-D spacer ilaphu inokubonelela ngolusu oluphambili lokumelana nokuxakeka, ukuhlala ixesha elide kunye ne-superio ...
Imisonto yeFiberglass eqingqiweyo
Imisonto yeFiberglass esikiweyo kubandakanya iMicu eqingqiweyo yeBMC, Imisonto egawuliweyo yeThermoplastics, Imisonto emanzi emanzi, iAlkali-Resistant Chopped Strands (ZrO2 14.5% / 16.7%). I-1) .Iintambo eziXhontiweyo zeBMC eziChongiweyo zeBMC ziyahambelana nepolyester engafakwanga, i-epoxy resin kunye ne-phenolic resi ...
Tissue zophahla manzi
Mat zophahla inyama esisetyenziswa ikakhulu zeendawana ezibalaseleyo izinto zophahla manzi. Lubonakala njengamandla aphezulu aqine, ukuxhathisa umhlwa, ukuntywila ngokulula ngebhitumene, njalo njalo. Amandla endawo kunye nokuxhathisa iinyembezi kunokuphuculwa ngakumbi ngokubandakanya ukuqiniswa ...
I-CSM E-Glass Chopped Strand Mat ziindwangu ezingalukwanga ezibandakanya izitayile ezinqunqwe ngokungacwangciswanga ezigcinwe kunye nomgubo / i-emulsion binder. Iyahambelana ne-UP, VE, EP, PF resins. Ububanzi be roll buphakathi kwama-50mm ukuya kuma-3300mm, amanqanaba obunzima besikali ukusuka kwi-100gsm ukuya kwi-900gsm. Ububanzi obuqhelekileyo1040 / ...
Umnyango we-FRP / Umnyango weFiberglass / iSMC
Iingcango zase China Beihai Fiberglass (iminyango ye-FRP) zixhaphake kakhulu kwiimodeli ezininzi ezikhoyo. Oku kwenza ukuba zisetyenziswe njengomnyango wokungena okanye wokuhlambela ekhaya, ehotele, esibhedlele, kwisakhiwo sorhwebo, njl.
Ifayibha yeglasi ye-1.Glass eqinisiweyo izinzile ngakumbi kunembiza yeentyatyambo eqhelekileyo, kwaye ihlala ixesha elide kunembiza yeentyatyambo eqhelekileyo Ingabamba idreyini yamanzi, ioyile kunye nolunye ulwelo ixesha elide, ngokuchasene nokuvuza okuhle. I-FRP imbiza yeentyatyambo ibuthathaka kubume, i-gre ...